Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandMasuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda
September 2, 2018 Puntland Mirror Jubaland, Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Jubbaland oo garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Puntland. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Puntland]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo maanta oo Axad ah iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo sidoo kale ah guddoomiyaha madasha maamul goboleedyada ayaa yiri: “Waxaan u nimid shirka madasha wadatashiga dowladdaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo looga wada hadlayo arrimaha masiiriga ah ee u gaarka ah, khuseeyana iskaashigooda iyo guud ahaan danta caam ka ah, waxaan rabnaa inaan helno dowlad goboleedyo mid ah, hadafkooduna yahay Soomaalinimo, hirgeliyana nidaamka fadaraaliisamka”.
Shirka 3-aad ee madasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in uu Kismaayo ka furmo beri oo Isniin ah.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya. Duqeynta ayaa Talaadadii ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee [...]
Istanbul-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa gaaray dalka Turkia, sida ay ilo-wareed saraakiisha dowlada ah ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Madaxweyne Cabdiweli ayaa ka dagay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Istanbul kadib [...]